कमजोरी चिकित्सकको मात्रै ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
डा. सुजितकुमार झा
कमजोरी चिकित्सकको मात्रै ?
आश्विन ६, २०७४ डा. सुजितकुमार झा
काठमाडौँ — ‘राज्य कमजोर छ, मेडिकल माफियाको विगविगी छ, प्राविधिक पक्ष डाक्टरतर्फ लाग्छ । मान्छे मरेपछि ५/७ लाखको औषधी मगाउँछ, बिरामी रिफर गर्न मान्दैन, पैसा नपाई लास उठाउन पनि दिँदैन । शक्ति यिनकै हातमा छ ।
अनि हुलहुज्जत विना केही हुँदैन। के गर्ने तिमी पनि डाक्टर, म पनि डाक्टरकै लापरबाहीले हातगुमाउन पुगेंँ। हामीले हुलहुज्जत गरेनौं, पैसा पनि लिएनौं, तर छानबिन पनि भएन, म जीवनभर अपांग भएँ, डाक्टरको कारणले। आजसम्म यो ५० वर्षमा कुनै एक चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज भएको थाहा छैन।’
यी हरफ एक पढेलेखेका व्यक्तिले मेरो फेसबुकमा लेख्नुभएको थियो। गुम्सिएको पीडा पोखिएका छन्, यी हरफमा। सधैं जस्तो सञ्चार माध्यममा आउने चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनाले सायद धेरै नेपाली आजित छन्। धेरैजना नेपालको स्वास्थ्यसेवा प्रवाहको व्यवस्थामाथि नै सशंकित छन्। हामी सबैले खोजेको र बस्ने देश नेपाल नै हो भने हामी सबै मिलेर यसको समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्छ। मानिस बिरामी हुनु, जन्म र मृत्यु समान शाश्वत सत्य हुन्। ढिलो–चाँडो अस्पताल जोकोही पुग्नुपर्छ। त्यसैले समाचारमा रमाउनेभन्दा पनि व्यवस्थालाई नियालेर गर्नसक्ने सकारात्मक काम गरौं।
बिरामीको उपचार : सामूहिक प्रयास
आफ्नो लक्षण पहिचान गरेर स्वास्थ्योपचारको आवश्यकता महसुस गर्नसक्ने बिरामी, बिरामीको अवस्था अनुसार स्वास्थ्योपचारको चाँजोपाँजो मिलाउन सक्ने आफन्त, बिरामीलाई सही समयमा अस्पताल पुर्‍याउन सक्ने एम्बुलेन्स, बिरामीको रोग पत्ता लगाएर सही सल्लाह दिने चिकित्सक, विभिन्न स्याहार गर्ने परिचारिका, उपचारका लागि आवश्यक उपकरण र औषधी मिलाउन सक्ने प्रशासन संयन्त्र लगायत धेरै निकाय बिरामीको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरू मध्ये कोही एक पक्षमात्र पनि गैरजिम्मेवार भए उपचारमा बाधा पर्छ। बिरामीको उपचारमा सोझो भूमिका राख्ने चिकित्सकको जिम्मेवारी अरूभन्दा अवश्य पनि बढी हुन्छ। छाती दुख्न थाल्दा हर्ट एट्याक हो कि भनेर अस्पताल समयमा पुग्नसके धेरै जोखिम न्युनीकरण गर्न सकिन्छ। तर ढिलो पुगे चिकित्सकले गर्नसक्ने उपचार धेरै सीमितमात्र बाँकी रहन्छ।
लापरबाही भन्नेलाई भन्न धेरै गाह्रो नलागे पनि लापरबाही शब्द वास्तवमै गहन छ। चिकित्सकले उपचारमा संलग्न भई उपचार कार्यबाट विमुख भएर बिरामीको स्वास्थ्यमा क्षति भए लापरबाही भएको मान्नुपर्छ। हेर्दा सजिलै देखिने बिरामी, हिँडेर अस्पताल पुगेका पनि चिकित्सकले नचाहँदा पनि उपचारको पृथक तर अवश्यम्भावी पाटोका कारण मृत्युवरण गर्न पुग्छन्। हरेक औषधी र शल्यक्रियाको आफ्नै साइड इफेक्ट र नोक्सान हुन्छ। परिस्थिति अनुसार स्वास्थ्योपचारमा फाइदा बढी देखिए जोखिम उठाएर त्यस्ता शल्यक्रिया गर्ने र औषधी चलाउने चलन चिकित्सा विज्ञानमा छ। त्यही बमोजिम सुसूचित मञ्जुरिनामा दिने गरिन्छ र जोखिम बोकेर उपचार गर्ने निर्णयमा चिकित्सक र बिरामी पुग्छन्। सामान्य वा जटिल, प्राकृतिक वा लापरबाहीपूर्ण एवं मृत्युको कारण वैज्ञानिक तरिकाले छानबिन हुनुपर्छ।
चिकित्सकीय लापरबाही हुन्न?
हरेक विधामा हुने विकृत कार्यजस्तै चिकित्सा विधा पनि यस्ता आपराधिक तत्त्वबाट अछुतो छैन। विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा गलत अभ्यास गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक छन्। तर अनुमान र आफूले चाहे बमोजिमको उपचार प्रतिफल नआउँदैमा लापरबाही भएको ठहर गर्नु अत्यन्त गलत हुन्छ। विचारणीय कुरा छ, चिकित्सकको लापरबाहीमा आफन्त ज्यान गुमाएको महसुस गर्नेले पक्कै पनि त्यस्तो चिकित्सकलाई आवश्यक कारबाही गराएर आफूजस्तै अरूलाई पनि कमसल चिकित्सकको सिकार हुनबाट जोगाउनुपर्ने हो। अप्रिय घटना घटे हुल जम्मा गर्ने, चिकित्सकको हुलहुज्जत गर्ने, अस्पताल तोडफोड गर्ने क्रियाकलाप हुन्छन्। छानबिनका लागि उजुरी गर्ने कता, न्याय पाउने कहिले र प्राविधिक रूपमा र पहुँचमा सबल अस्पताल र चिकित्सकसँग जित्न सकिने वा नसकिने अन्योलताको अवस्था छ। त्यसैले हुलदङ्गा नै धेरैले रोज्ने गरेको देखिन्छ। तर कहिलेसम्म? सम्मुन्नत समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने न्याय व्यवस्थाबाट टाढा बसेर हुँदैन।
उपचारका क्रममा हुने लापरबाही देखिने घटनाको व्यावहारिक, वैज्ञानिक र छरितो न्यायिक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग व्यवस्था गर्न जरुरी छ। रोगको उपचारका क्रममा हुने मानवीय क्षतिका विभिन्न कारण हुन्छन्। रोग निदान गर्ने क्रममा हुनसक्ने जोखिमप्रति हरेकपटक चिकित्सकलाई कारण मानेर सामाजिक, मानसिक र आर्थिक दबाब दिइरहे उच्च जोखिममा रहेका बिरामीलाई जोखिम मोलेर उपचार गर्ने चिकित्सकको आँट निरुत्साहित हुन्छ र यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्छ।
चिकित्सकीय लापरबाहीबाट हुने मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी पक्कै पनि चिकित्सक स्वयं हुने र त्यसको सजाय पनि चिकित्सकले भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर भिडले तय गरेको आरोपका आधारमा हरेक मानवीय क्षतिलाई चिकित्सकको लापरबाहीको संज्ञा दिएर भिडतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी चिकित्सकसँग आर्थिक असुली गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अत्यन्त अवैज्ञानिक र अदूरदर्शी छ। चिकित्सकको लापरबाही नहुने होइन, तर सबै घटना लापरबाहीले हुने हैन। र लापरबाही भएको हो वा होइन, यसको फैसला छानबिनबाट हुनुपर्छ, भिडबाट होइन। जिम्मेवार र नियमनकारी निकायले छानबिन आयोगको परिकल्पना गरिहाल्ने समय आएको छ।
डा. झा त्रिवि शिक्षण अस्पताल,महाराजगन्जमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७४ ०७:२३
हेरेर सिक्ने विद्यार्थीलाई सुनेर सिकाउने शिक्षक
आश्विन ६, २०७४ डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली
काठमाडौँ — कम्प्युटर शिक्षण आफैमा रमाइलो र अप्ठ्यारो विषय हो । प्राविधिक विषय हुनाले यसको अध्ययन र अध्यापनमा निरसपन हुँदैन । अंग्रेजी वा गणितजस्तो विद्यार्थीले सम्झन अल्छी मान्ने खालको विषय पनि होइन यो । एउटा शिक्षकले जसरी विद्यार्थीलाई गणित पढाउँदा दिक्कलाग्दो हुन्छ, त्यस विपरीत कम्प्युटर पढाउँदा विद्यार्थीहरू बढी रमाउँछन् ।
किनकि यो विषय सैद्धान्तिक ५० प्रतिशत र प्रयोगात्मक ५० प्रतिशत आफैले तत्काल परिणाम निकाल्न सक्छन्।
म एक दृष्टिविहीन शिक्षक। एउटा ‘माउस प्वाइन्टर’को सहायताले गर्नुपर्ने सबै काम कि बोर्डको सहायताबाट मात्र गर्नुपर्दा ग्राफिक्स कार्य स्वाभावैले कठिन हुन्छन्। तर ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ भनेजस्तै यो पनि असम्भव भने छैन। म आफैले कम्प्युटरमा विभिन्न चित्र बनाउन त सक्दिन, तर मैले गरेको निर्देशनको पालनाबाट मेरा विद्यार्थी भने यो कार्य सहजै गर्न सक्छन्, गरिरहेकै छन्। मैले मेरो ल्यापटपमा रहेको ‘स्क्रिन रिडर सफ्टवेयर, जेएडब्लुएस, एनभीडीए’को माध्यमबाट कम्प्युटरका निर्देशन र कमाण्ड सुन्छु र विद्यार्थीलाई सोही बमोजिम गर्न लगाउँछु। यसरी विद्यार्थीले सहजै रूपमा सिक्नसकेका छन्।
सानो कक्षादेखि सुरु गरिएको कम्प्युटर शिक्षा तल्ला कक्षाहरूमा प्रयोगात्मक कार्यभन्दा बढी जानकारीमूलक छ। सानो कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी उमेरका हिसाबले पनि माथिल्ला कक्षाका भन्दा भिन्न र चञ्चले स्वभावका हुन्छन्। उनीहरूको जिज्ञासु तर अति नै चञ्चल स्वभावको सन्तुलन मिलाएर उनीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान हासिल गराउनु त्यति सजिलो भने हुँदैन। त्यतिमात्र होइन, बेलाबेला देखिने हार्डवेयर मर्मतको पक्ष अझै ठूलो समस्याका रूपमा देखापर्छ। यसले गर्दा धेरै कम्प्युटर सानो हार्डवेयर समस्याका कारण नचल्ने समस्या भोग्नुपरेको छ।
अर्काको देखासिकी गरी सिक्ने विषयलाई निर्देशनकै भरमा सिकाउनु आफैमा बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु भएन। हाम्रा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी संख्या र राज्यको लगानीको सन्तुलन त मिलेको छैन नै, यसमा पनि सहरिया र गाउँले परिवेश धेरै भिन्न छ। स्रोत–साधनमा व्यक्तिका पहुँचका हिसाबले पनि गाउँ र सहर २०:८० को अनुपातमा छ। सोही पाठ्यक्रममा निर्धारित पाठ्यपुस्तकलाई शैक्षिक सामग्री सम्पन्नतामा अध्यापन गराउनु र पुस्तक हेरेर मात्र अध्यापन गर्नु धेरै अन्तर हुन्छ।
कोरा सैद्धान्तिक विषय पढाउनुभन्दा प्रयोगात्मक सहितको प्राविधिक विषय पढाउनु फरक र दु:ख छ। किनकि सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गरे/नगरेको मापक केवल परीक्षाको मार्कसिट हो, तर प्रयोगात्मक विषयको मापक त तत्काल उसलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरी हेर्न सक्छ। मैले अनुभव गरेको अर्को कठिनाइको पक्ष हो, विद्यार्थीले तयार गरेको गृहकार्य वा उनीहरूले कम्प्युटर ल्याबमा तयार गरेका ग्राफिक्स परिणामको उचित मूल्याङ्कन गरी तत्काल सुझाव दिन पनि गाह्रो पर्छ।
कम्प्युटर एउटा विद्युतीय मेसिन हो। यसलाई प्रयोग गर्न विद्युतीय शक्ति आवश्यक पर्छ। करेन्टकै आधारमा मात्र चलाउन सकिने यस्ता मेसिन दृष्टिविहीन शिक्षकद्वारा चलाउनु आफैमा जोखिम पनि हुन्छ। त्यसै त साना विद्यार्थीलाई यसको खतराबाट टाढा राख्नुपर्नेमा उनीहरूकै सहायताबाट विद्युतीय कार्य गर्नु अति नै संवेदनशील काम हो। हेरेर सिक्ने र भनेर सिकाउने बीचको कठिनाइ सहज रूपमा महसुस गर्न सुनेर वा पढेर होइन, सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित भएर मात्र गर्न सकिन्छ।
पहुँचयुक्तताका हिसाबमा सामान्य स्क्रिन रिडर बाहेक कुनै साधानस्रोत नभएको अवस्थामा आफ्नो निजी ल्यापटपको स्क्रिन रिडरको सहायताले कक्षा २ देखि ८ सम्मका विविधतायुक्त विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गर्नु त्यति सजिलो छैन। ससाना विद्यार्थीले जथाभावी प्रयोग गरेर ल्याउने समस्या त्यसको नियमित मर्मत–सम्भारको अभाव दैनिक भोगिएका यथार्थ नै हुन्। राज्यले अन्य विद्यालयसरह दिने सुविधा बाहेक केही दिनुपर्छ भन्नेसम्मको चेतनासमेत सम्बन्धित निकायमा नरहेको देखिन्छ। दृष्टिविहीन शिक्षक र देख्ने विद्यार्थी बीचको तालमेल अनि विद्यार्थीले स्वाभाविक रूपमा गर्ने बदमासी सामान्य र यथार्थ नै हुन्।
निर्धारित पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक तथा निर्देशिकाहरू पनि दृष्टिविहीन मैत्री छैनन्। आम शिक्षकलाई मध्यनजर गरी निर्धारण भएका पाठ्य र प्रयोग सामग्रीको प्रयोग गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्रदान गर्नु एक दृष्टिविहीन शिक्षकलाई ठूलै चुनौती र अवसर हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सरकारको पाठ्यक्रमलाई एमपी ३ फम्र्याटमा उत्पादन गरी दृष्टिविहीन शिक्षकहरूलाई वितरण नगरिएको त होइन। तर यो अति सीमित छ। केही संघ, गैरसरकारी संस्थाहरूले सीमित रूपमा तयार गरेका अडियो एमपी ३ र डेजी भर्सनका पाठ्य पुस्तकहरूमा बाहेक सरकारले कुनै चासो राखेको छैन।
संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा सबैका लागि निशु:ल्क र अनिवार्य गरेको भए पनि पाठ्यक्रमले यसलाई सर्वसुलभ गराउनसकेको छैन। हुन त नीति निर्माण तहमा जबसम्म दृष्टिविहीनको उपस्थिति र हस्तक्षेपकारी पहुँच पुग्दैन, त्यतिबेलासम्म अपाङ्गतामैत्री परिवेशको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न। यसका लागि सम्बन्धित वर्गका संघ/संस्थाको समयोचित ‘एडभोकेसी’ जरुरी पर्छ।
हुन त दृष्टिविहीन शिक्षकले देख्ने विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय अध्यापन गराउनेको संख्या थोरै होला। यसो भनेर राज्यले आफ्नो लाचारीपन ढाकछोप गर्न मिल्दैन। प्राविधिक विषयको शिक्षण गर्ने दृष्टिविहीन शिक्षक कम भए पनि गैरदृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई विभिन्न विषय अध्यापन गराउने दृष्टिविहीन शिक्षकको संख्या भने आधा हजारजति छ। चाहे सामाजिक, नेपाली, गणित, नैतिक वा अंग्रेजी अध्यापन गर्ने शिक्षक जोकोही किन नहोउन्, उनले दृष्टिविहीन मैत्री शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्नसकेको छैन।
आदिम कालतिरका अपाङ्गता भएकाहरू जसरी समाजमा घृणित व्यवहार सहन बाध्य थिए, त्यो व्यवहार आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महसुस गर्न विवश हुनुहुँदैन। आजको युग सबै नागरिक उत्पादनमूलक हुनुपर्ने युग हो। राज्यले भत्ता ख्वाएर पाल्नुपर्ने दृष्टिविहीनको ठूलो हिस्सा आम नागरिकसरह देश निर्माणमा सरिक छन्। थोरै अनुकूलताको व्यवस्था राज्यले मिलाउने चेष्टामात्र गरिदिने हो भने पनि देशभरका सबै उच्चशिक्षा हासिल गरेका दृष्टिविहीन मुलुक निर्माणमा अन्य आम नागरिकसरह योगदान गर्न तयार छन्। यसका लागि राज्यले नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा सबैको पहुँचको उचित प्रबन्ध मिलाई हरेक संयन्त्र संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी बनाउनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षणलाई पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ।
राज्यका हरेक सूचना दृष्टिविहीनले थाहा पाउन वा पढ्न सक्ने फम्र्याटमा उपलब्ध हुनुपर्छ। सबै सरकारी कागजातका इ–कपी कम्तीमा युनिकोडमा राखिनुपर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेका सबै पाठ्यक्रम युनिकोडमा राखिदिँदा के आपत्ति छ? युनिकोडमा राखिएका सबै दस्तावेज दृष्टिविहीन बाहेक अन्य नागरिकले पढ्न त कुनै बाधा पर्दैन नि।
राज्यले दृष्टिविहीन मैत्री र पहुँचयोग्य वातावरण सिर्जना गरी सबै नागरिकलाई वास्तविक समानताको व्यवहार गर्ने मनसाय राखोस्। हामी जस्ता दृष्टिविहीन शिक्षकले पनि अपनत्वका साथ मुलुकका सबै सूचना ग्रहण गर्न सकौं र मुलुकलाई केही न केही योगदान गर्नसक्ने वातावरण बनोस्। सबै प्राविधिक शिक्षा/शिक्षण सर्वसुलभ र दृष्टिविहीनमैत्री बनाइयोस्।